PlayWM, Qtile, Ratpoison, Sawfish na Spectrwm: 5 WM ozo maka Linux | Site na Linux
PlayWM, Qtile, Ratpoison, Sawfish na Spectrwm: WM ndị ọzọ maka Linux
Taa, anyị ga n'ihu nke asaa banyere Njikwa Window (Windows Managers - WM, na Bekee), ebe anyị ga-enyocha ihe ndị a 5, site na ndepụta anyị 50 a tụlere na mbụ.
I3WM, IceWM, Ion, JWM na MatchBox
Metisse, Musca, MWM, OpenBox na PekWM
1.5 Ihe nkiri
“Otu mara mma Window Manager maka kọmputa enthusiasts. Ezubere iji nwee ike igwu egwu na ntọala gị. N'ụzọ ọ bụla onye ọrụ ọ bụla chọrọ ịmata, ọ bụghị naanị Linux Geeks dị elu, nwere ike ịgbanwe ọdịdị ha ma gbanwee omume nke desktọọpụ na windo ha. Ọ dịkwa mfe iji, ekele maka mmalite mmalite ya nke na-ezere ịgụ akwụkwọ niile dị mkpa".
Agaghị arụ ọrụ: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ n’ihe karịrị afọ asatọ gara aga.
O nyere ezigbo nghazi (ntọala) yana ịma mma nke ihe eji eme ihe dị njikere.
O nwere atụmatụ ma ọ bụ arụmọrụ na-atọ ụtọ maka oge ya, dị ka nghọta na ogwe ọrụ na ntinye akpaaka nke windo akọwapụtara, n'ihi nhazi usoro ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi.
O kwere ịgbanwe akụkụ ya niile, site na obere mgbanwe emere na faịlụ ederede ederede nke ọma. All na otu ebe, na nhazi akpaaka-Akwajuru. N'ime ndekọ ~ / .playwm ị nwere ike ịchọta faịlụ nhazi niile maka ihe dị iche iche PlayWM. Na nkenke, e wuru ya site na ngwa dị iche iche jikọtara n'otu ebe, n'okpuru ezigbo akwụkwọ doro anya edere n'ụdị nkọwa.
Ndị na-esonụ na-nyeere maka download na nwụnye njikọ.
“Ihe Ngosipụta ụdị windo zuru ezu, nke e dere ma hazie na Python".
Tipo: Igwe. Ọ bụ ezie na, ọtụtụ ndị na-ewere ya dị ka ụdị di omimi.
EỌ dị mfe, obere na extensible. Ọ na - enye gị ohere ịmebe ma tinye atụmatụ nke onwe gị, wijetị na iwu gị, iji bulie ma dozie usoro ọrụ na eserese eserese na ụzọ onye ọrụ si arụ ọrụ.
Edere ya ma hazie ya kpam kpam na Python, iji nweta ike na ngbanwe niile nke asụsụ a ma dozie ya maka mkpa nke ọtụtụ.
O nwere obodo na-arụ ọrụ ma na-eto eto, na-agbazinye ihe mgbe niile iji nyere ndị ọzọ aka.
Ọ bụ kpam kpam Free na Open Source Software, ma a na-ekesakwa ya n'okpuru ikikere nke MIT.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara nbudata ya, akụkọ na ntinye ya, njikọ njikọ ndị a dị: 1 njikọ, 2 njikọ y 3 njikọ. Nke ọzọ mpụga njikọ maka ozi ndị ọzọ.
“A mfe Windo Manager na-enweghị ọbá akwụkwọ dependencies, ọ dịghị fancy ndịna, ọ dịghị clunky window decorations, na ọ dịghị òké dependency. Ọ na-atụ nke ọma mgbe GNU ihuenyo nke mere ebube na mebere ọnụ ahịa.".
Agaghị arụ ọrụ: Achọpụtara mmemme ikpeazụ n’ihe kariri afọ atọ gara aga.
Na-enye ohere ka ekerịta ihuenyo n’ime okpokolo agba na-abụghị n’elu. Nakwa na windo niile na-abawanye oke n'ime okpokolo agba ha iji mee ka ọtụtụ oghere ihuenyo eji.
A na-ahazi ya site na faịlụ ederede dị mfe. Ọ na-enye mmekọrịta dị jụụ ma dị gara gara site na isi ọdụdụ. Na mgbakwunye, o nwere maapụ prefix iji belata mbugharị isi nke na-emebi Emacs na ụdị sọftụwia ndị ọzọ.
Ọ nwere ike ije ozi dị ka ihe mmalite ngwa na ọkwa ngosi. Ogwe ihe omuma ya na egosiputa naanị mgbe odi nkpa, ma tinyeghi tray usoro.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu ngwugwuYa mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
"Ma ọ bụn njikwa windo na-eji asụsụ Lisp ede ederede. Amụma ha pere ezigbo mpe ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ ndị njikwa Window. Ihe mgbaru ọsọ gị bụ naanị ijikwa windo n'ụzọ kachasị agbanwe ma dị mma. A na-etinye ọrụ WM dị elu na Lisp maka ndọtị ma ọ bụ nkọwapụta n'ọdịnihu".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ ntakịrị afọ 3 gara aga site na mwepụta nke nsụgharị ọhụrụ ya # 1.12.90, agbanyeghị na saịtị GitHub nke ikpeazụ ya mere bụ ihe na-erughị otu ọnwa gara aga.
O nwere ikike-ijikọ aka ike, nke pụtara na ihe niile ọrụ Sawfish nyere nwere ike jikọta ya na igodo (ma ọ bụ bọtịnụ òké).
Ọ na-enye njikwa ihe omume dị mma, yabụ ị nwere ike ịhazi ụzọ ọ ga-esi zaghachi ha.
Ọ na-ekwe ka njikwa nke ihe ndị dabara na windo, na-achịkwa iji mee na mgbe windo ụfọdụ dabara na usoro iwu, ha na-erube isi na omume ụfọdụ na akpaghị aka.
Ọ nwere usoro dị mma nke isiokwu na-agbanwe agbanwe, na-enye gị ohere ịmepụta gburugburu dị iche na nke ndị dị. Na mgbakwunye, o nwere ezigbo isiokwu dị iche iche nke ndị ọzọ dị.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu sawfishYa mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ ma ọ bụ ndị a: njikọ 1 y njikọ 2.
"Ma ọ bụA obere na ike Window Window maka X11 na-agba mbọ na-anọ n'ụzọ ka ndị bara uru na zuru ezu ohere nke ihuenyo nwere ike iji maka ihe dị mkpa karị maka onye ọrụ".
Ọrụ ngo: Ikpeazụ ọrụ achọpụtara banyere obere ihe na-erughị 3 ọnwa gara aga na ya ọhụrụ tọhapụrụ mbipute (3.4.1), ọ bụ ezie na ndị ọzọ na-adịbeghị anya emee na-kwuru na ya.
Ọ nwere ezigbo ntọala ndabara ndabara, ọ chọghị ịmụ asụsụ mmemme iji mee mgbanwe ọ bụla. Otú ọ dị, ọ bụ ndị hackers dere ya maka ndị na-agba ọsọ, ọ na-agbakwa obere, kọmpat, na ngwa ngwa.
Okike ya sitere n'ike mmụọ nsọ site na "xmonad" na "dwm" WM. Na-ewere nke kachasị mma, iji mepụta WM siri ike karị, zuru ezu mana enwere ike ịhazi ma nwee ike ịhazi ya.
A na-ahapụ ya n'okpuru ikikere ISC. Enwere ike ịnabata patch gị, ọ bụrụhaala na enyere ha ikikere na ISC.
Ihe ndị ọzọ ama ama gụnyere: Dynamic RandR support, ebe ọ bụla igodo nke ihuenyo niile na keyboard ma ọ bụ òké, ogwe ọnọdụ ọnọdụ, faịlụ nhazi mmadụ na-agagharị, ịmalitegharị na-enweghị ntụkwasị obi, ngwa ngwa mmalite enwere ike itinye windo ma ọ bụ wepu ya na mpaghara isi.
WM emelitere a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwungwu "ụdịdị"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ndị a na-esote 5 «Gestores de Ventanas», n'adabereghị na nke ọ bụla «Entorno de Escritorio», akpọ PlayWM, Qtile, Ratpoison, Sawfish na Spectrwm, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » PlayWM, Qtile, Ratpoison, Sawfish na Spectrwm: WM ndị ọzọ maka Linux
Ọ dị m ka nseta ihuenyo nke ọ bụla WM ga-abụ ihe atụ, agbanyeghị ekele maka ozi 🙂
Ekele m, Chiwi. Daalụ maka okwu gị. Ọ ga-abụrịrị ihe dị mma, mana dịka ọdịdị nke WM ọ bụla na-agbanwe oge, ihe kachasị mma bụ ịga na njikọ gọọmentị nke onye ọ bụla wee hụ ozugbo nseta ihuenyo nke ndị mmepe ha nyere. O doro anya na ọ bụghị ha niile na-enye screenshots, mana imirikiti na-eme ma emelite, ọ bụrụhaala na ha na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ.
A tọhapụrụla gam akporo 11, mara mgbanwe ya kachasị mkpa na akụkọ
Huawei na-ezube ịhapụ HarmonyOS dị ka onye nnọchi gam akporo na 2021